Guide Reaver. Fanitsakitsahana haingana ny WPA sy WPA2 haingana. | Avy amin'ny Linux
ATAO ATAO ATAO AMIN'NY TRACK TRACK 5 R3 TO WEP, WPA AND WPA2 NETWORKS WITH WPS STANDARD ROUTER.
Ny rafitra WPS dia tsy mahomby amin'ny iray amin'ireo fomba fanaon'ny fenitra rehefa manampy fitaovana vaovao amin'ny tamba-jotra WiFi antsika, indrindra ilay mampiasa nomera PIN, satria ny mpanjifa manandrana mifandray amin'ny tambajotra dia afaka mandefa isa PIN misy isa 8 ary raha tsy mifanandrify amin'ny idirana fidirana izany, manondro ny lesoka saingy hita fa ny fandefasana ireo isa 4 voalohany ihany no valiny azo. Noho izany, ny isan'ny fahafaha-mahita ny isa mitete avy amin'ny 100 tapitrisa mitambatra ka tsy latsaky ny 11.000, noho izany dia resaka fanatrarana azy amin'ny fanafihana mahery vaika ao anatin'ny ora maromaro.
Amin'ny voalohany dia hitantsika ireo mpampifanaraka tambajotra efa misy.
Afaka mandeha ny maody fanaraha-maso.
didy Airmon-ng start wlan0, ny interface interface mon0 dia tsy maintsy avela, izay no hanombohana ny fanafihana reaver.
Tabilaon'ny dingana 1 sy 2 ..
Izahay dia manamarina ireo tambajotra izay nanokatra ny WPS izay azo notafihina (mariho raha tsy manome tamba-jotra ny baiko, midika izany fa tsy misy tambajotra misy ireo toetra ireo ao amin'ilay faritra).
didy manasa --- mon0
Dingana faha-4 sy farany.
Nanomboka ny fanafihantsika izahay, izay tsy amin'ny fonosana toy ny teo alohany, fa tamin'ny alàlan'ny tsimatra, ny rafitra dia mizaha ny fitambaran'ny vondrona misy isa 8 (naoty tao amin'ireo tambajotra izay voahitsakitsaka ny pin dia 12345670) raha sanatria misy hafa mitambatra dia maharitra 1-2 ora) ianao dia mila miditra amin'ny lakile.
didy reaver -i mon0 -b (bssid) -c (fantsona) -vv
ahoana no ahitanao ny pin dia 12345670
ary ny lakileny dia 364137324339… ARY NY NETWORK dia WPA.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Guide Reaver. Fanitsakitsahana haingana ny WPA sy WPA2 haingana.
62 hevitra, avelao ny anao
Antony iray hafa hampiasana ny BackTrack.
Eny fa somary tsy mandeha amin'ny laoniny izany fanehoan-kevitra izany ... izay distro rehetra dia azo ampifanarahana amin'ny fampiasana ireo fitaovana ilaina hanaovana an'izany sy bebe kokoa ... ampy fotsiny ny hampijanonanao ny sosona kely 8
Ny distro rehetra dia azo ampiasaina, fa raha ny marina dia toa mampihomehy ny famoahana lahatsoratra amin'ny fomba fanaovana azy, satria efa fantatsika fa ny ankamaroan'ny olona, ​​rehefa mamaky ireto lahatsoratra ireto dia mampiasa azy ireo hangalarana ny wifi amin'ny mpifanila vodirindrina aminy ..., dia hanontany tena ny sasany hoe maninona Tsy mampiasa wifi intsony izahay ary mandalo amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny PLC'S XD
Manaiky aho. Ny fangalarana Wi-Fi dia toa iray amin'ireo asa manambany indrindra ataon'ny mpahay siansa solosaina. Ity dia torolàlana ho an'ny Lammers.
ps mankanesa any amin'ny internet efa misy tariby taloha dia hifarana ny fahasosoranao, ps raha misy zavatra eny amin'ny arabe ary hitan'ny solosaina findainy ilay izy ary heveriko fa ny tenimiafinao dia mieritreritra aho fa tsy misy heloka bevava natao
Carls jr dia hoy izy:
Mandritra izany fotoana izany dia ekeko, fa maro ny olona manana Internet satria hoe tafiditra ao anaty fonosana izy io ary tsy fantany hoe inona izany, ary heveriko fa raha mbola mifandray ianao nefa tsy manararaotra na manimba ny hafa dia tsy tokony ho olana izany.
Mamaly an'i Carls jr
Tsy mila mampiasa PLC 🙂
Mitranga ireo zavatra ireo mba hampiasana ireo zavatra tsy ilaina ary toa tena ahazoana aina ny priori.
Izaho manokana dia tsy mampihetsika na inona na inona (toa ny manaitra ahy ny tsy fahatsiarovan-tenako) no mahatonga ahy hiahiahy ho marefo.
Ohatra, amin'ny tranga Wi-Fi, fantatro fa tena mety ny wps, fa tsy foana kosa aho amin'ny fotoana voalohany ahazoako miditra amin'ny router. Amiko fa mifandray izy ireo nefa tsy mangataka na inona na inona amin'ny alàlan'ny fanindriana bokotra iray fotsiny dia efa naharikoriko ahy. Mitovy amin'ny fahalemen'ny sudo izany, indraindray misy zavatra miseho izay mitombo ny tombontsoa ary tsy ilaina na iza na iza manoro ahy momba ny filaminana, lozika tsotra io. Raha mampitombo ny tombontsoanao ianao dia mety ho mora tohina. Raha ny marina dia mbola tsy nametraka sudo mihitsy aho ary tsy hanao izany mihitsy.
Raha fintinina, ho ahy, izay fampiononana rehetra mamela ahy hanao zavatra iray hialana amin'ny fepetra fiarovana ho ahy dia antony ampy hisalasalana ny fampiasana azy ary noho izany, raha azo atao, dia efa mitaona ahy hamono azy io. Ny tsy mahazo aina sasany dia tsara kokoa noho ny manokatra varavarana fidirana amin'ny olon-tsy fantatra.
Mila mampiasa plc aho, tsotra izao satria tsy afaka mampiasa vpa, ao amin'ny router, noho ny antony sasany manantona ny router-ko raha mampiasa wpa sy iray amin'ireo adapter wifi 3 usb aho, izay ampiasako amin'ny linux, raha ampiasako amin'ny windows tsy misy mitranga ... fa amin'ny linux dia voatery mampiasa wep aho ... ary mazava ho azy,. Fantatsika rehetra fa mora ny mamaky lakilen'ny wep, ary isan'andro miaraka amin'ireo lahatsoratra an'arivony maro izay mamporisika ny olona hanao ireo zavatra ireo.
Tamin'ny farany dia tsy maintsy nisafidy ny handany 50 euro aho, ary hampiasa plc 3 ary hamita olana. Inona ny manaraka? Ampianaro ny fomba fanaovana lavaka amin'ny rindrin'ny mpifanila trano aminao ary mangalatra Internet amin'ny alàlan'ny herinaratra? xd
Inona no azo vakina. Ka raha mamoaka boky torolàlana momba ny fomba fanenjana hareza izy ireo dia mamoaka izany mba hangalaran'ny olona eny an-dalambe?
Hadalana firy, azafady.
Ary any @ pandev92, mandany vola mividy PLC ve ianao fa tsy mandany ny vola amin'ny router tsara, miaraka amin'ny fepetra fiarovana? Avy amin'ny zavatra niainako dia fantatro tsara fa ny PLC dia manome fampisehoana kely noho ny Wifi N, indrindra raha taloha na milamina ny fametrahana herinaratra.
Vao namboarina ny tranoko, ny zavatra hafa dia ny fampiasana orange ary mitady router misy ip feo aho, tsy dia mora loatra izany, ary raha hitako io dia tsy misy hevitra hamboarana azy handefasana feo.
by the way annubis, ny hevitrao momba ny fanamafisana antsy dia tsy marina tanteraka, amin'ity tranga ity dia azo ampitahaina amin'ny: »manual hahafantatra manindrona olona» xD
Mampalahelo fa vitsy ny olona mahalala fitaovana ho an'ny fidirana an-tsokosoko toa ny Backtrack, izay tsy vitan'ny mangalatra WiFi ny mpifanolo-bodirindrina aminy, fa koa mba hahazoana tahiry manana fiarovana malemy ary mazava ho azy, dia manafika DDoS amin'ny fomba mahomby kokoa.
BackTrack dia ho toy ny distro GNU / Linux izay misy fitaovana ahafahana manao an'io karazana io, na dia ny mangalatra WiFi aza no tena fantatry ny be mpampiasa indrindra araka ny efa noresahiko teo aloha.
Fanontaniana iray: Ary raha manana sivana IP ny tamba-jotra, ahoana no ahitako fa manana an'io karazana sivana io izy ary ahoana no handikana azy?
Heveriko fa ny tianao hampiasaina dia ny hoe manana alàlan'ny sivana MAC ny router (fa tsy ny IP). Amin'ity tranga "hypothètical" ity, ny zavatra tokony hataonao dia ny fampiasana fitaovana fitiliana tambajotra mahazatra, andraso mandra-pahitanao mpanjifa avela mifandraika amin'ny AP, dia tokony alain-tahaka ny MAC an'ny mpanjifa voalaza aminao hametraka azy eo amin'ny karatry ny tambajotrao. mampiasa fitaovana toy ny MAC Charger na mitovy amin'izany, izany hoe, ovao ny MAC amin'ny karatrao ho an'ny an'ny mpanjifa ahafahana mifandray.
Avy eo dia somary manjavozavo ny dingana, satria "hypothèttique" dia azonao atao ny miditra amin'ny router hanampiana ny MAC anao tany am-boalohany, na hanala an'io sivana sns, sns, fa raha dinihina dia mazàna ny olona dia tsy mamela izany safidy izany matetika. Tokony horaisinao ho azy fa raha nahavita azy izy ireo, dia satria tsy dia hain'izy ireo akory ny miditra amin'ny router sy manamboatra zavatra, noho izany dia avo lenta ny fahafahan'izy ireo mahatsikaritra fandrobana.
Eny, mampiasa sivana adiresy ara-batana (na MAC) aho mba hisorohana ny fambara Wi-Fi tsy hangalariko ary hahatonga ny fiainana ho fadiranovana ho an'ireo mpangataka te hangalatra tambajotra tsy misy tariby. Na izany aza, ny fitaovana toy ny MAC Charger dia matetika tsy misy ilana azy raha ny maodely, marika ary / na chipset amin'ireo karatra tambajotra no matetika fantatra miaraka amin'io adiresy io, ka na dia manaron-tava ny tena adiresy MAC aza izy ireo, dia tsy hisy dikany ny fanovana ny MAC.
Misaotra nanazava ny fisalasalako.
blad dia hoy izy:
ka manana sivana mac amin'ny alàlan'ny fananganana mac ny client anao ahafahanao miditra amin'ny tamba-jotra
Valiny amin'ny bla
Avy eo dia antsoinao hoe lammers ny "crackers" ... toa tsy mampino ny olona mahalala ny fampiasana ny rafitra Linux voaomana amin'ny fitantanan-draharaha sy ny fitantanana tambajotra tsy mahalala fa ny sakana 3 voalohany an'ny MAC dia ireo izay naseho tamin'ny mpanamboatra. ary ny 3 hafa dia kisendrasendra fotsiny ... ny chipset dia tsy liana afa-tsy amin'ny mpanera ary tsy aseho amin'ny MAC, ny IP dia tendren'ny DHCP na MANOLOTRA ka tsy misy ifandraisany amin'izay lazainao izany, misy ny zavatra manao an'izany Toa mihomehy ianao fa tsara kokoa ny mampahafantatra ny tenanao, mianatra ary mizara.
Tsy misy firariana ny finoana ratsy, arahaba ary manantena aho fa ity fanehoan-kevitra ity dia mandrisika anao hanatsara ny fahalalanao.
backtrackattack dia hoy izy:
Tsara raha afaka manao izany amin'ny android 4.1 ho antsika izay tsy manana karatra tambajotra wifi (raha ny tena izy dia fako ireo programa milaza fa manao an'io amin'ny android)
Valio ny backtrackattack
Ny olana dia tsy ny android, amin'ny alàlan'ny fametrahana terminal ary ny fananana miorim-paka ny solosaina, azonao atao ny mametraka sy mampandeha an'ity karazana rindrambaiko ity.
Ny olana amin'ny telefaona finday dia ny karatra Wi-Fi misy fotony ary ny ankamaroany dia tsy mamela ny maody fanaraha-maso izay ilaina amin'ny fampiasana ireo rindrambaiko ireo.
Novakiako tany ho any, fa nahavita nametraka azy tao anaty mode monitor ny S2 ... saingy tsy fantatro hoe taiza izy io.
PS: Tsy nandoa Internet nandritra ny taona maro aho.
Abraham T dia hoy izy:
Mahaliana tena mahaliana
Valiny tamin'i Abraham T
rho dia hoy izy:
Ahoana no hametrahako fonosana sy fiankinan-doha amin'ny Ubuntu 12.04? Tsikaritro fa tsy ao amin'ny repos izy ireo ...
Mamaly an'i rho
Google namana ... feno toro-lalana momba ny fametrahana azy io
Ireo torolàlana fametrahana dia satria nisy namorona azy ireo, tsy mampaninona ny mampianatra fa tsy ny tsy fahampian'ny pejy fampianarana dia mandefa olona mankany amin'ny Google ...
Tsara ny mahafantatra hoe marefo isika ary manao ahoana ny fanaovana azy… ary ankehitriny, ireo izay tsy nahalala azy koa.
Tsy ratsy ny lahatsoratra momba ny filaminana. Fantatro fa tsy dia manintona toy ny maharary izy ireo, fa ny "famolahana ny volo."
@Jlcmux Ao amin'ny dingana voalohany dia nanoratra "airom-ng" ianao fa tsy "airmon-ng". Gaga aho fa tsy nisy nahatsikaritra, XD!
Ary raha tsy najanona ny WPS, inona no azo atao? Satria tsy hiasa intsony ireo dingana nohazavaina tamin'ilay lahatsoratra.
Tsy misy na inona na inona, tohizo ny fampiasana ny fomba fandikana rakibolana mahazatra, ny hery malemy ary miandry arakaraka ny fahasarotan'ny lakile, indrindra raha WPA2 io.
Ary bebe kokoa raha voasivana amin'ny adiresy MAC.
Maynard dia hoy izy:
Valiny tamin'i Maynard
Mampihomehy ahy ny mieritreritra fa mitady ny lafy ratsy ataon'ny olona foana isika. Izany no antony nilazan'izy ireo fa ratsy na maloto fitondran-tena ny fahazoana lakilen'ny wifi. Raha mametraka izany drafitra izany isika dia mila mandeha tsotra izao miaraka amin'ny paranoia matahotra ny olona rehetra satria iza tokoa no azontsika itokisana….
Raha ratsy na tsia ny "halatra" na "hacking" wifi dia avelantsika ho an'ny fieritreretan'ny olona tsirairay izany. Rehefa misafidy hampiasa karazana haitao ihany koa ny olona iray dia tsy maintsy mampianatra ny tenany amin'ny fomba fitantanana an'io haitao io. Moa ve ny olona mividy fiara tsy mila mahalala ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana (tena ifotony) ao amin'ny fireneny? Sa mety tsy tompon'andraikitra amin'ny fananako fiara aho ...
Rehefa mahazo serivisy amin'ny zavatra iray (wifi amin'ity tranga ity) dia lôjika ny mieritreritra fa tsy maintsy manabe ny tenantsika amin'ny fomba hiarovana ny tenantsika amin'ireo fanafihana mety iharan'izany karazana rafitra izany isika.
Raha endri-tarehimarika madio izy ireo dia haingana be toy ny fitondrana WEP fa raha hexadecimal dia maharitra ela kokoa ... mety ho ora maro.
Jesus Israel Perales Martinez dia hoy izy:
Misaotra, manandrana ny tamba-jotra wifi aho, nivoaka fa amin'ny alàlan'ny default dia manana an'io safidy io voalamina ary tsy fantatro akory xD
Valiny tamin'i Jesus Israel Perales Martinez
Tsara, manao fitsapana vitsivitsy amin'ny wifislax 4.6 ao amin'ny tambajotranoko aho fa tsy fantatro izay mitranga fa misy ifandraisany amin'ny router-ny izany fa tsy manome pin izany ary ampiasana ny wps aho tsy azoko fa nanandrana tamin'ny wifiway, wifislax, backtrack aho, izay mifandray amin'ny router ihany no azonao atao mila adiny 1 na 2 vao tsy misy pin mivoaka, mba misy mahalala izay mety ho izy?
Salama, azonao atao ve ny milaza amiko hoe inona ireo programa ilaiko hametrahana an'ity programa ity satria nahita tutorial maro aho ary tsy lazain'izy ireo izay ampiasaina hametrahana azy.
Mamaly amin'ny alemanina
LOOL! Tsy programa izany fa Operating System, fizarana miorina amin'ny Linux, zava-dehibe izany satria efa nilaza taminao izy fa afaka mampiasa ny kinova LiveCD 🙂
Amin'ny dingana voalohany dia: airmon-ng NO airom-ng ary amin'ny dingana faharoa dia nasianao ny 'airmon-ng start wlan0' rehetra, tsy maintsy 'misaotra ireo namana Linux sy miarahaba anao! 0 /
Nanao an'io fanafihana io aho ary nahatsapa ilay mpifanila vodirindrina vokatr'izany nanala ny wps aho. Ny nahasarika ny saiko dia ny fomba nahafantarany fa notafihana izy? raha ny fahalalako azy dia miafina ireo fanafihana ireo. Hanadihady izany aho: - /
fulgencio dia hoy izy:
Eny, amin'ny findaiko azoko atao. Ampahafantaro. Ny PIN. voalaza. ho an'ny. raiso ny lakile
Mamaly an'i fulgencio
Reagan dia hoy izy:
Rindrambaiko Movistar, izay mandray, amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fanavaozana, ny fanavaozana ny firmware avy amin'ny orinasa mihitsy, satria raha miankina amin'ny mpampiasa ity fizotrany ity dia ambany dia ambany ny isan-jaton'ny fanavaozana, nohavaozina izy ireo tamin'ny fomba tsotra mba hialana amin'ity fanafihana ity. Ny router dia mamela ny fanandramana maromaro voafetra alohan'ny hanohizana ny fitsapana, izay manalava be an'ity dingana ity, ka aleony miverina amin'ny fomba nentim-paharazana hahitana ireo karazana lakile ireo. Ho an'ny fanabeazana hatrany ary tsy misy karazana fihetsika tsy ara-dalàna, mazava ho azy;).
Valiny tamin'i Reagan
abiu dia hoy izy:
Ry namako, azafady, azafady mba andefasanao ahy ny mailaka bactrak amin'ny mailako? Efa nitady azy tamin'ny internet aho ary hitako ny pejy ofisialy ary milaza fa tsy eto intsony izy io, izao dia misy kali malaza nefa tiako ny bactrak
Mamaly an'i abiu
Miala tsiny fa, BackTrack dia / no anaran'ny distro izay efa fanaony, ankoatry ny zavatra hafa, ny tambajotra fanaraha-maso (na fanitsakitsahana), solosaina, sns.
Fotoana vitsy lasa izay dia nijanona ny fiantsoana azy hoe BackTrack ary nantsoina hoe Kali, saingy saika nitovy izy io, mitovy ny fampiharana azy, mitovy ny tanjon'io, io ihany no nanova ny anarana.
DVD io, tsy azo alefa amin'ny mailaka.
Sintomy i Kali ary araho ny fampianarana hitanao amin'ny Internet, dia hanompo anao toy izany koa izy ireo.
niozeka dia hoy izy:
Izaho dia olon-novolo nianatra tena tamin'ireny rehetra ireny ary hitako fa rehefa manamarina ireo tamba-jotra miaraka amin'ny wps nanokatra dia tsy manome valiny ho ahy izany, saingy fantatray fa misy ny namana iray satria nampandeha azy io tamin'ny solosainany ary niasa ho azy izany. Fantatrao ve ny mety ho antony hafa mety hitranga?
Mamaly an'i niozeka
Salama! HO AN'NY REHETRA.
Mba hilazana fotsiny an'io amin'ireo olona tsy manaiky ny fanitsakitsahana ny tambajotran'ireo mpifanila vodirindrina aminy dia tiako ny milaza azy ireo fa raha ny fijerin'ny etika azy dia ny fandoavan'ny tsirairay ny vidin'ny serivisiny manokana mba tsy hangalany azy. ho an'ny mpifanila vodirindrina amiko, indrisy fa any amin'ny firenena sasany dia olona maro no tsy afaka mandray io karazana serivisy io, efa ela aho no iray tamin'ireo olona ireo, soa ihany ary misaotra an'Andriamanitra fa nahita asa mendrika aho ary nanana ny fomba handoavana izany. hoy ny serivisy, ry tompokolahy ankehitriny, raha toa ka ny maro an'isa amin'ity forum ity dia mila mandoa ny tolotra omen'izy ireo manokana, tsara ho anao izany, saingy aza mba maneho ratsy ny amin'ireo olona tsy afaka manao izany, azafady, satria azo antoka fa tsy fantatrao izay filàna sy ny zavatra tsy maintsy ataon'ny olona iray mba hahavelomany eto amin'ity izao tontolo izao ity izay mihalasa lafo kokoa ny fiainana.
fa ity fitaovana vps ity dia tsy mandeha tahaka ny ataonao amin'ny alefa iray
Namaky fanehoan-kevitra marobe (tsy ny rehetra) ary ny hevitro marina dia hoe raha misy manana Wi-Fi dia nandrehitra ny tranonao tamin'ny Wi-Fi aho dia miditra ao amin'ny habakabakao io. Mandalo anao foana ny onja RF. Be. Ohatra, ny GPS amin'ny triangulation GSM dia tsy mandoa serivisy velively, fa araraoty kosa ny taratra RF an'ny mpamerina GSM. Ny tiako hahatongavana dia ny hoe mangalatra Wi-Fi dia tsy ho tsy ara-dalàna velively ary toa tsy heloka bevava na fihetsika manambany ahy mihitsy izany. Manantena aho fa manampy anao ny hevitro
Heveriko fa mitovy aminao Roberto. Nandritra ny taona maro dia napetraka tao an-tranoko ireo fambara ireo na aiza na aiza no halehako ... ary araraotiko izy ireo 😛
Miarahaba anao, efa notanterahiko daholo ny dianao mankany amin'ny eprfection, rehefa manatanteraka ny baiko «reaver -i mon0 -b (bssid) -c (channel) -vv» manomboka ny fonosana saingy mijanona eo ihany izy: »[+] Miandry fanilo avy amin'ny «(TARGET MAC)»
Misy mahalala ny antony?
Audie dia hoy izy:
ry namako, na ny manasa na ny mandidy dia tsy mety amiko, azoko antoka fa mila mametraka zavatra aho, azafady mba ampio aho, misaotra mialoha
Mamaly an'i Audie
josewill9999@hotmail.com dia hoy izy:
inona no ratsy kokoa?
Valio ny josewill9999@hotmail.com
Tsy ratsy ny mahita famantarana eny amin'ny rivotra, ratsy kokoa ny mandoa andevo mandritra ny fiainana, sa tsy izany?
demapepe dia hoy izy:
Mamaly an'i demapepe
fandraisana anjara tsara ho an'ny siansa
Amiko dia tsy hitranga amin'ny fanilo fanilo avy eo fa mijanona satria hisy izany
Mamaly amin'ny axel
Andao hojerentsika ... Ka azo atao ve ny mahazo ny lakilen'ny WPA amin'ny modem miaraka amin'ny WPS? Ary azo atao ve izany? Ary maninona na ilay olona notafihinao no nanindry ny bokotra WPS na tsia?
Skinny541 dia hoy izy:
Tiako ny mangalatra wifi amin'ny fangalarana fotsiny ary navelanay tany iray volana lasa izay, miandry ny hametrahana Internet aho, mila Internet aho ary tiako ny mangalatra wifi Hahaha
kender dia hoy izy:
Tena mety izany izao satria manana Internet maimaim-poana aho ^^
Mamaly an'i kender
Misaotra betsaka amin'ny fampianarana mazava. Rahampitso dia mampanantena ny hilaza aminao ny fandehany aho.
Hoy izy ireo MAD !!! dia hoy izy:
Efa nandinika an'i Reaver tamin'ny Linux VM nandritra ny iray volana mahery aho tamin'ny tambajotra Wi-Fi marobe ary tsy nahavaky ahy mihitsy izany.
Valiny hoy izy ireo hoe MAD !!!
Brandon dia hoy izy:
Somary tara xD, sarotra ny manao fanafihana WiFi amin'ny alàlan'ny milina virtoaly, ny zavatra tsara indrindra dia (ary antenaiko fa manana ianao) manandrama amin'ny usb mivantana izay manana fidirana tonga lafatra amin'ny karatry ny tamba-jotra.
Valiny tamin'i Brandon
Aorian'ny fanaovana an'io fanafihana io, ahoana no fomba hamerenako ny wifi? sa tsy maintsy mamerina ny solosainako aho?
Valiny tamin'i Alan
Dingana ahafahana mamorona LiveCD - DVD - USB avy hatrany am-boalohany amin'ny Debian sy ny vokariny.